Huawei FreeBuds 3: Igwe okwu-na-akagbu ekweisi ọhụrụ | Akụkọ akụrụngwa
Huawei FreeBuds 3: ekweisi ọhụrụ nke ika ahụ
Huawei bụ otu n'ime ụdị ndị dị na mbipụta a nke IFA 2019 na Berlin. Ndị na-emepụta China ahapụla anyị ozi ole na ole, gụnyere ekweisi ọhụrụ ha, FreeBuds 3. Ọgbọ ọhụụ ọhụrụ nke ekweisi ekwe ntị sitere na akara ndị China, nke na-abịa na usoro nke mmelite na ụda na arụmọrụ ya, nke na-enyere aka ezigbo ọganiihu n'ahịa.
Ndị a Huawei FreeBuds 3 nzọ na jigide mmebe ahụ anyị hụrụ n'ọgbọ ndị gara aga, na igbe nke ha bu kwa ihe. Ọ bụ ezie na ha hapụrụ anyị mmelite ọhụụ ma ọ bụ ọrụ ọhụụ na usoro nke ụda n'okwu a. Ya mere enwere ozi.
Otu n'ime akwụkwọ akụkọ ọhụụ bụ na mgbawa emere maka ngwa ndị a. Nke a bụ Kirin A1, nke ga - enyere Huawei FreeBuds 3 ndị a aka ịrụ ọrụ nke ọma.Ekele dịrị ya, ọ ga-ekwe omume ịnwe bandwidth ka mma, latency na mma ụda kacha mma. Nzọụkwụ dị mkpa maka ika ahụ.
Otu n'ime ọrụ kachasị mkpa na ha nọ n'ọrụ mkpọtụ kagbuo. Ọ bụ mkpọtụ mkpọtụ amamịghe, nke nwekwara customizable. Ya mere, ọ na-enye ohere ka ndị ọrụ nweta ọtụtụ ihe na ya. Latency bu ihe ozo di nkpa. Dị akara nke China enwetala akara nke 190 ms n'ime ha. Ya mere, anyị nwekwara ike iji ha gwuo egwu.
Nke a bụ latency kachasị dị ala enyerela aka. Obi abụọ adịghị ya na ọ ga-abụ otu n'ime ike nke Huawei FreeBuds 3. Ọ bụ ezie na batrị ahụ na-enye anyị obodo kwụụrụ onwe nke oge 4 iji na-aga n'ihu, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị ejiri batrị ahụ na ikpe ahụ, enwere ike ịgbatị ya ruo elekere 20 dị ka ụlọ ọrụ ahụ kwuru.
Ugbu a enweghị data na ọnụahịa ma ọ bụ mmalite nke Huawei FreeBuds 3. Dị a ekwuola na ha ga-ahapụ anyị ozi ọzọ na nke a. Ya mere, anyị nwere olile anya ịmatakwu banyere ya n'oge na-adịghị anya, ebe ọ bụ na ọ bụ ọgbọ kacha mma nke ekweisi nke ika ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Huawei FreeBuds 3: ekweisi ọhụrụ nke ika ahụ
Huawei P30 Pro na-ebupụta agba ọhụrụ abụọ yana gam akporo 10
Insmụ ejima bụ ihe ọzọ na Fresh'n Rebel AirPods